Home Wararka Sh. Sharif oo markii sadaxaad kulan la qaatay Fahad Yasin, maxaa laga...
Sh. Sharif oo markii sadaxaad kulan la qaatay Fahad Yasin, maxaa laga hadlay?
Shantii asbuuc ee la soo dhaafay ayaa waxa kulamo qarsoodi ah dhexmareen Madaxweynihii hore dowladii ku meelgaarka ah Shiik Sharif Shiikh Axmad iyo Agaasmaha Hay’adda NISA Fahad Yasin. Kulumadaas ayaa intooda badan ka dhacay guriga Shiikh Sharif ka degan yahay magalaada Muqadisho.
Warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in mid ka mid sadaxdaas kulan uu goobjoog ka ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Qatar Mudane, Hasan Bin Hamza Asad Mohammed waxa uuna kulankaas ka dhacay safaraada Qatar dhexdeeda.
Warar laga helayo ilo lagu kalsoon yahay oo ay hesho MOL ayaa sheegaya in kulan qaatay in ka badan saacad uu xalay dhexmaray Sheekh Shariif iyo Agaasimaha Hay’adda NISA Fahad Yasin kaas oo ka dhacay guriga Shiikh Sharif. kulanka ayaa qaatay in ka badan saacad.
Inkastoo MOL ayan wali helin xog rasmi ah oo ka soo baxday kulankaas, hadana warar hordhac ayaa sheegaya in labada nin ay kawa hadleen arimo badan oo ay ku jiraan xiisadaha siyaasadeed ee maalmahan ka jirtay magaalada Muqdisho iyo qaabkii Shiikh Sharif shaqsiyan loogu qancin lahaa in uu qayb ka noqdo dowlada Farmaajo.
Fahad Yasin ayaa in mudo ah waxa uu kulamo kala duwan la qaadanayay qaar ka mida hogaanka mucaaradka isaga oo ku guulaystay in uu kala furfuro isla markaana hakad galiyo qorshaha mucaaradka ee looga soo horjeedo dowlada Fedaraalka.
Dad badan ayaa la yaabay sababta keentay in Shiikh Sharif uu kulamo qarsoodi ah la qaato ninkii ka danbeeyay amarkii loogu diiday isaga iyo madaxda kale in ay u safraan magaalooyinka Kismaayo iyo Baladweyne, isla markaana cadaadis ku haya mucaaradka dowlada.
Mid ka mida taageerayaasha Shiikh Sharif oo ka jawaabaya wararka la isla dhexmarayo ee la xiriiira kulanka labada nin ayaa yiri “…wadaadadaan waa kooxo wada shaqeysto oo anaga oo dhan ruwaayad noo dhigaya, waa isku fakar, waa isku caqli, shacabka unbay been u sheegayaan… waxaana xaqiiq ah in maalintiina mucaaradnimo sheegtaan, habeenkiina waa ay wada cashaynayaan, wadankaan ilaah baa u maqan”.